Kulan ku saabsan dib u habeynta hay’adaha garsoorka oo lagu qabtay Muqdisho - Halbeeg News
Kulan ku saabsan dib u habeynta hay’adaha garsoorka oo lagu qabtay Muqdisho
MUQDISHO(HALBEEG)-Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan kula qaatay guddoomiyeyaasha maxkamaddaha gobolka Banaadir.
Kulanka ayaa looga hadlay dardargelinta howlaha garsoorka iyo sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa hay’adaha garsoorka.
Garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed ayaa kula dardaarmay guddoomiyeyaasha maxkamaddaha gobolka Banaadir, inay ka shaqeeyaan, siddii loo Xoojin lahaa hergalinta nidaam caddaaladeed oo ay isku haleyn karaan shacabka loona badali lahaa Fahamka qaldan ee horay looga aaminsanaa maxkamadaha dalka.
“Waxaa muhiim ah inaad xoojisaan hirgelinta nidaamka cadaaladda, si shacabka ay u ogaadaan in uu jiro garsoor la isku haleyn karo, islamarkana meesha looga saaro fahamka qaldan ee laga aaminsan yahay garsoorka dalka, waxan ballan qaadeynaa in wax laga qaban doono baahiyaha dhanka garsoorka ee ay qaban shacabka” ayuu yiri guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka.
Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed iyo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Garyaqaan Abshir Cumar Cabdullaahi, ayaa si wada jir ah u guddoonsiyay guddoomiyeyaasha maxkamaddaha xeerarka Madaniga,Ciqaabta iyo Labadooda Habraac.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Farmaajo ayaa dhowr mar isbedel ku sameeyay guddoomiyeyaasha maxkamaddaha gobolka Banaadir si wax looga qabto tabashada shacabka kuwaasoo inta badan saluug ka muujiyay nidaamka garsoorka dalka.
TRUMP: Arrinta Khashoggi ma saamaynayso heshiiskii hubka ee Sucuudiga